बामदेव गौतमको सांसद सपना पूरा गर्न डोल्पाबाट फर्किए राज्यमन्त्री बुढा – Everest Dainik – News from Nepal
बामदेव गौतमको सांसद सपना पूरा गर्न डोल्पाबाट फर्किए राज्यमन्त्री बुढा
दुनै (डोल्पा), भदौ १३ । गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट नेपाली काँग्रेसका सञ्जय गौतमसँग हार व्यहोरेका नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको प्रतिनिधि सभा पुग्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढा गृहजिल्ला डोल्पामा नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई भोट मागेर फर्किएपछि गौतमलाई बाटो खुलेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिने या नदिने दोधारमा परेपछि गृहजिल्ला पुगेका उनी मतदाताको राय लिएर काठमाडौं फर्किएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टका लागि टेकबहादुर शाहीले लेखेका छन्।
गौतमलाई नेकपाले डोल्पामा उठाउने चर्चा केही महिनादेखि चलिरहेको अवस्थामा राज्यमन्त्री बुढा राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएर काठमाडौँ फर्किएका हुन् ।
जिल्ला बसाइका क्रममा उनलाई मतदाताले राम्रो सुझाव र सल्लाह दिएकको भन्दै आफु राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले बताएका छन् ।
‘मैले गृह जिल्लामा मतदाताको राय लिएको छु, केन्द्रको निर्णय र मतदाताको राय अनुसार राजीनामा दिनेछु’, उनले भनेका छन् । राज्यमन्त्री बुडाले हाइप्रोफाइल शीर्ष नेता पाउनु डोल्पालीका लागि शौभाग्य भएको पनि दाबी गरे । बुढाले उपनिर्वाचनमा वामदेवलाई भोट हाल्न पनि मतदातालाई अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीले वामदेव गौतमलाई जितायौं भने जिल्लाको मुहार फेरिनेछ, ढुक्‍क हुनुहोस्, पार्टीले घात गर्ने छैन’, उनले मतदातालाई फकाउँदै भने ।
‘वामदेव एक उच्च पदस्थ नेता हुन्, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, मैले राजीनामा दिएँ भने मन्त्री र राष्ट्रियसभाको सर्त राखेको छु, तपाईँहरुको मतको कदर गर्छौं’, उनले भने ।
यस्तो छ जनताको चासो
डोल्पाबाट भारी मतले विजयी राज्य मन्त्री बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन गराई वामदेवलाई जिताउने निर्णय केन्द्रले कुन सर्तमा गरेको भन्ने कुरा डोल्पालीले जान्न चाहेका छन् । मतदाताले वास्तविक कुरा जान्न चाहे पनि राज्य मन्त्री बुढाले भने कुनै कुरा खोल्न मानेनन् ।
त्रिपूरासुन्दरी नगरपालिका र ठुलीभेरी नगरपालिकास्थित जुफालमा भएको छलफलमा अधिकांशको प्रश्न नै केन्द्रको निर्णय के हो ? कुन सर्तमा राजीनामा गरी उपनिर्वाचन गराउने ? भन्ने थियो।
मतदाताहरुको प्रश्नको जवाफमा राज्यमन्त्री बुढाले केन्द्रले आधिकारिक निर्णय गरिनसकेको र मतदाताको राय सुझाव अनुसार राजीनामा दिने उत्तर दिएका छन्।
ट्याग्स: Bamdev, cpn, Dhan Bahadur budha, डोल्पा, धनबहादुर बुढा, बामदेव गौतम